Eye Yoga လေးစမ်းကြည့်ဘာ :) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Eye Yoga လေးစမ်းကြည့်ဘာ :)
Eye Yoga လေးစမ်းကြည့်ဘာ :)
Posted by Shwe Ei on Jan 27, 2014 in Community & Society, Health & Fitness, Society & Lifestyle | 30 comments
ကွန်ပျူတာကြည့်တာလေးခဏရပ်ပြီး ဟောဒီကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ ညောင်းညာကိုက်ခဲနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို သက်သာအောင် လုပ်ကြစို့
တခါတရံမှာ ကျွန်မတို့ ဟာ ကွန်ပျူတာစခရင်ကို နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် သတိလက်လွတ် စိုက်ကြည့်နေမိတတ်ပါတယ်။ သိထားရမှာက ရှင့်ရဲ့ နောက်ကြောတွေ ပုခုံးတွေလိုဘဲ ရှင့်မျက်လုံးဟာလဲ ညောင်းညာကိုက်ခဲတတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ တနေကုန်အညောင်းထိုင်ပြီး လေလည်လိုက်သလိုပါဘဲ လို့ Karin Wiedemann of Urban Yoga in Washington, DC ကပြောပါတယ်။ (စိတ်ထဲထင်သလိုဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည် )
အောက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး eye strain ဖြစ်တာသက်သာအောင် ဒါမှမဟုတ် eye strain မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ကြတာပေါ့။
၁) ထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်ပါ၊ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူလာအောင်ပွတ်ပါ။
၂) မျက်လုံးတွေကိုပိတ်လိုက်ပီး လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို မျက်လုံးပေါ်အုပ်လိုက်ပါ။ အိုက်လိုလုပ်တာဟာ မျက်လုံးကိုအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့မှုရပ်တန့်သွားစေပြီး လက်ဖ၀ါးကအပူတေကိုစုပ်ယူစေတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
၃) အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို အားပါးတရ ဆယ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပါ။ လိုအပ်တယ်ထင်ရင် ခဏခဏ လုပ်လို့လဲရပါတယ်။
၁) ထိုင်ခုံပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေပါ၊ ခေါင်းကိုမလှုပ်ပါနဲ့
၂) မျက်နှာကျက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါ…ပြီးရင် ညာဘက်ကိုကြည့်ပါ…ပြီးရင်ကြမ်းပြင်ကိုကြည့်ပါ။
ကြမ်းပြင်ကနေပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ပါ။ အိုက်ဒါပြီးရင် မျက်နှာကျက်ကိုဘဲပြန်ကြည့်ပါ။
၃) ဘယ်ပြန်ညာပြန်ပြောင်းကြည့်ပြီး ငါးကြိမ်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်ပါ။
နှစ်ရှည်လများ ကွန်ပျူတာကြည့်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့မျက်ကြည်လွှာကို အမာရွတ်ဖြစ်စေပြီး အမြင်အာရုံတချို့တ၀က်ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ်လို့ Clayton Blehm ကပြောပါတယ်။ သူကတော့ ကွန်ပျူတာကြည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ မျက်စိပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ အချိန်အကြာကြီး စခရင်ကိုကြည့်တာဟာ မျက်သားခြောက်တဲ့ရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သလို သင့်မျက်လုံးအတွက် ချောဆီလိုမျိုးအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ မျက်ရည်တွေလုံလောက်အောင် ထုတ်မပေးနိုင်တော့တာမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်လို့ The Vision Council ရဲ့ Medical Advisor, Justin Bazan ကရှင်းပြပါတယ်။
သင့်မျက်လုံးကို electronic stress ဘယ်လောက်များများဖြစ်စေပြီလဲဆိုတာကို ပြောနိုင်ပါရဲ့လား???
အမြင်အာရုံတွေညောင်းညာကိုက်ခဲနေပြီဆိုရင်၊ မျက်လုံးထဲကအရည်တွေထွက်ပြီး နီရဲလာပြီဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ လည်ပင်း နားထင်ကြော ဒါမှမဟုတ် ပုခုံးကြောတွေကို သက်သာလိုသက်သာငြား ပွတ်သပ်နေမိပြီဆိုရင် သင့်မျက်လုံးကို လိုအပ်တာထက်ပိုခိုင်းမိပြီလို့ Dr.Bazan ကပြောပါတယ်။
မျက်လုံးကိုအနားပေးဖို့အတွက် Dr.Bazan အကြံပြုတာက 20-20-20 ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းပါ။
မိနစ်၂၀တိုင်း ပေ၂၀အကွာဝေးကို စက္ကန့်၂၀ကြာအောင် စိုက်ကြည့်နေဖို့ပါဘဲ။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ…ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာစခရင်ကြောင့်ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးကို အပန်းပြေစေနိုင်မှာပါ။
အကယ်ရွေ့ ရှင်က မျက်မှန်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ မျက်ကပ်မှန်တပ်တယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် စာကြည့်မျက်မှန်တပ်တယ်ဆိုရင် မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီး ကွန်ပျူတာကြည့် မျက်မှန်တလက်လုပ်လိုက်ပါ။
အိုက်ဒါတွေကို ကြားခံပစ္စည်းတွေအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး ဥပမာ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေချိန် အာရုံစိုက်ရတဲ့အခါ အမြင်အာရုံကို အလင်းဖြာထွက်မှုတွေဆီကနေ ဖြတ်တောက်ပေးနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်မှန်တပ်စရာမလိုတဲ့ ကွန်ပျူတာအသုံးများသူတွေတောင် အိုက်လိုကွန်ပျူတာကြည့်မှန်သုံးတဲ့ မျက်မှန်မျိုးတပ်ထားတဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ Dr.Bazan ကထပ်လောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
မှတ်ထားပြီး နောက်လဲ ခဏခဏ လုပ်မယ်
ဟတ်ကဲ့ သများလဲ လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပီးဘာဘီ…အိုခီဘာဒယ် အူးနို
ခုလို ကွန်ပူတာ သမားတွေအတွက်
ညက်လုံး ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန်ပေးဖော်ရတဲ့အတွက်
မကွေးဂျီးဒေါ်တစ်ယောက် ယောက်ကျား ညန်ညန် ရဘာစေဗျာ …
ကျုပ်မှာ ဥငေးတွေ တစ်ပုံဂျီး ချိဒေးဒယ် .. ခိခိ
ဂွတ်.. ဂွတ်.. ဂွတ်…
ကျေးကျေး အိုညိ.. မျက်စိတစ်ခုခု ဖြစ်မှာ အရမ်းကြောက်တာ… သတိလက်လွတ် ကွန်ပျူတာ ကြည့်မိလို့ ခေါင်းတွေလည်း ခဏခဏကိုက်တယ်..
ခုလို တင်ပေးတာ အာဘွား..
သိပ်မကျာခင် ဖွဘုတ်မာ ဓာတ်သေတေ တပြွတ်ကြီးတင်ပီး ကြွားအုံးမယ် ညင်းညင်း :boss:
ဇက်ကြောတက်ရင် ခေါင်းကိုက်ရင်..ဟို အံချာဒုန်းကို နှိပ်ခိုင်းလေကွယ်
နောက်လဲအကျင့်ဖစ်သွားအောင် ခုကထဲက ခိုင်းစရာချိတာ များများခိုင်းထားေိေိ
ကျောက်စ်ကတော့ အဲဂလိုမဖြစ်အောင် ကွန်ပူတာသုံးရင်…
မျက်စေ့အေးမှာလေးတွေ မကြာမကြာရှာပြီး ကြည့်ပလိုက်တယ်…
ဪ… သဘာဝ ရှုခင်းပုံလေးတွေကို ပြောတာပါ… ဟီ ဟိ
မှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ။ မကြာမကြာလုပ်ကြည့်ပါမယ်။ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး ရွှေအိပိုစ့်ကိုသွားးးးးးးးးး
မိနစ်၂၀တိုင်း ပေ၂၀အကွာဝေးကို စက္ကန့်၂၀ကြာအောင် စိုက်ကြည့်နေဖို့ပါဘဲ။
ကွမ်းရွက်စလေးကို.. မျက်လုံးထောင့်(နှာရိုး) ပေါ်မှာကပ်တာပါ..
ကျုပ်ကတော့.. အ်ိမ်ထဲအလှစိုက်တဲ့.. သစ်ပင်ကအရွက်နုလေးကပ်ပြီး.. ညအိပ်တယ်..
မနက်ဆို.. မျက်စိညောင်း.. တော်တော်သက်သာတယ်..။
သူ က မျက်စိ အခိုးကို စုပ်သွားတာတဲ့။
Eyes Exercise ကတော့ အမြဲလုပ်ရတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက မျက်လုံးကို လုံလုံ အုပ်။
ပြီးရင် မျက်လုံး ဖွင့်ရက် အပေါ် အောက် ဘေး ၂ ဖက်၊ လက်ယာရစ် လက်ဝဲ ရစ် စသည်ဖြင့် ကစားရတယ်တဲ့။
အဲဒါ လေ့ကျင့်ခန်း ဖော် မျက်လုံးတဲ့။
မှန်လိုက်လေ သဲဆွိရယ် … ခွိ (ခွက်ဒစ်တူ ဟိုလူရီး)
သဲဆွိ ဘယ်ရောက်နေလည်းတို့…. လွမ်းနေတယ်တို့ အော်နေသေးလားဟမ်??
အခုတလောမှာအလိုအပ်ဆုံးဆေးနည်းဖြစ်နေတယ်.. ညညမီးပိတ်ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့ မျက်စိတွေနီနေရော… :)) အစ်ကိုက သစ်ပင်အစိမ်းတွေကြည့်တဲ့ သစ်ပင်တွေလည်း ဖုံတက်ပြီးသိပ်မစိမ်းနိုင်တော့ဖြစ်နေတယ်… လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရပြီး.. ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်မှာလေးတွေကိုတော့ဇွဲရှိရှိစမ်းသပ်ဖို့မေ့နေပြီး.. ဆိုးကျိုးများတာသိတာတွေအတွက် ၀ိရိယများတဲ့ တမီးကိုတမီးသိပ်မုန်းတာပဲ မေမေ
သများတော့ ဖုန်းထဲက ဂိမ်းတေ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ဘီ….CandyCrush ကလွဲလို့
ဟတ်ကဲ့ အမြည်းလေးစားကျိပီးမှ ၀ယ်ဘာနော်
ဘေးပတ်လည်က ကွန်ပျူတာ စကရင်တွေဆီ ရောက်သွားရော
အဲ့မှာပဲ လေ့ကျင့်ခန်းက ပြန်ပြတ်သွား
သတိရတိုင်း မျက်လုံးကိုအနားပေးကြည့် အမှန်တကယ်အကျိုးထူးပါအိ